Lacagaha Telefishannada: Cardiff oo 32.5m ka lacag badnaatay Atletico Madrid
HomeWararka MaantaLacagaha Telefishannada: Cardiff oo 32.5m ka lacag badnaatay Atletico Madrid
11/02/2015 Abdiwahab Ahmed
SPAIN: Waxa lagu qaybiyaa lacagta qaaciidada 1:7.7. Premier League, waxa lagu qaybiyaa 1:1.5. France iyo Italy heshiisyo cusub ayaa la saxeexaa
Lacagaha ay kooxuhu ka helaan ciyaaraha ay telefishinnadu baahiyaan, ayaa soo saartay kala fogaansho weyn oo ka dhex jira waddanka Spain iyo horyaallada dalalka kale. Waxa soo baxday in labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay helaan lacago badan laakiin kooxaha kale ee horyaalka La Liga ay dulman yihiin.
Arrinta ugu layaabka badan ayaa noqotay markii kooxda yar ee Cardiff ay lacag ka badan 32.5m euros ay soo gashay marka la eego Atlético Madrid. Ma aha tiradani mid ku sallaysan in aan ciyaaraha Atletico la baahinin, hase yeeshee waxay ku sallaysan tahay saamiga marka horeba loogu talo galay in ay Atletico ka hesho TV-yada.
Qorshaha uu Spain ku qaybiyo lacagaha telefishinnada oo ka badan 800m euros ayaa waxa ay tahay: boqolkiiba toban oo noqonaysa 80m euros in la siiyo kooxaha heerka labaad ee loo yaqaano Liga Adelante. 90 boqolkiiba ee soo hadhayna waxa lagu qaybiyaa: 50 boqolkiiba si siman ayaa loo qaybsanaa, 25 boqolkiiba waxay lagu bixinayaa natiijooyinka ciyaaraha iyo guulaha ay kooxdu gaadho, halka 25 boqolkiiba ee soo hadhayna lagaga shaqaynayo adeegyada danta guud.
Labada naadi ee Real Madrid iyo Barcelona oo qaata inta badan lacagta tv-yada dalka Spain, waxa sannadkii u soo xerooda koox walba 140m euros, tiradani waxa ay soo xerootay xili ciyaareedkii 2013-2014. Waxa ay lacagtani ka badan tahay ta ay helaan kooxaha kale ku dhowaad siddeed jeer.
Lacagtan oo erey bixinteeda la yidhaahdo xuquuqda telefishinnada, ayaa waxa ballan qaaday madaxweynaha xidhiidhka LFP, Javier Tebas in uu kordhin doono nidaamka lagu qaybiyo (qaaciidada) kana dhigi doono 1:3.5 ama 1:4.5 taas oo ka dhigan in haddii Madrid ay hesho 140m euros in kooxda ugu hoosaysa horyaalku ay heli doonto ugu yaraan 40m euros.
Dhinaca Premier League, naadiga Liverpool ayaa kaalinta koowaad ka galay dakhligii uga soo xerooday xuquuqda telefishinnada, waxaana soo gashay lacag dhan 117m euros, halka Cardiff oo ugu hoosaysa ay heshay 74.5m euros. Qaaciidada lagu qaybiyo ayaa ah mid ka caddaalad badan xidhiidhada kale, waxaana lagu salleeyaa 1:1.5.
Germany, horyaalka awoodda badan ee dalkaas ee loo yaqaano Bundesliga, waxa lagu qaybiyaa lacagta xuquuqda telefishinnada qaaciidada 1:2 inkasta oo isugeynta lacagta la qaybsanayo ay yartahay oo ay tahay 475m euros. Bayern Munich ayaa hesha lacagta ugu badan laakiin wax sidaa u badan kama badna kooxaha kale, waxay heshaa 36.5m euroshalka Eintracht Frankfurt ay intii ugu yarayd ka heshay oo ahayd 18.2m euros.
Italy, heshiisyo cusub ayaa dhawaan la saxeexay oo soconaya 2015-2017 oo lagu qaybsan doono 945m euros xili ciyaareed kasta. Lacagtan ayaa waxa ay ka kala iman doontaa Sky 572m euros iyo Mediaset 373m. xili-ciyaareedkii hore Juventus ayaa heshay lacagtii ugu badnayd ee xuquuqda telefishinada, waxa qasnaddeed ku dhacday lacag dhan 94m euros, halka kooxda Sassuolo ay heshay 17.9m. Waxa ay 5.25 jeer ka hoosaysaa Juventus.
Horyaalka France, waxa dhawaan la cusboonaysiiyey heshiiska qaybsiga dakhliga xuquuqda telefishinnada, waxaanay kooxuhu qalinka ku duugeen heshiis soconaya illaa sannadka 2020. Waxa ay wax ku qaybsan doonaan qaaciidada 1.3.5.
Ugu dambayn, horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa noqday ka lacagta ugu badan ka hela telefishinnada, waxaana sannadkii 2013-2014 soo gashay lacag dhan 1.875 billion euros.
Halan si fiican uga eeg koox waliba inta ay ka hesha lacagta xuquuqda tv-yada
Ciyaaryahan Pirlo iyo koox Maraykan Ah Oo Wadahadal U Socdo
Pirlo Oo Ku sii jeeda Australia iyo Kulan Uu La yeelanayo Madaxda kooxda Sydney
09/06/2015 Abdiwahab Ahmed
Mourinho Oo Telefoon U Diray Modric Iyo Wixii Uu Kala Hadlay